PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-02-04 - PHAKATHI KWAKHO YILOKHU:
PHAKATHI KWAKHO YILOKHU:
Ilanga langeSonto - 2018-02-04 - Izindaba -
Izimbali ezidliwayo phambilini bezisetshenziswa kuma- gastronomic restaurant (lezo zindawo ezisebenzisa kakhulu ubuciko nesayensi uma zenza ukudla), kodwa muva sezingenise (izimbali) nasezindaweni zokudlela ezejwayelekile.
Kuthiwa kulo nyaka zizotholakala eziphuzweni ezithakwe ngazo, zitholakale kokokubamba umoya, uthole ukuthi lokho kudla kunambitheka okwembali ethile. Izinhlobo zaziphuzo ezizotholakala ngama- lavender latte, pink hibiscus tea, i- elderflower-flavoured cocktail ne- bubbly.
Okusampushana okufana nematcha powder, i- maca root necocoa powder yikho okuzongena esikhaleni sekhofi njengoba kwaziwa ukuthi linika umdlandla. Kulo nyaka kuthiwa lizokwehlelwa yidumela kwabanye.
Ama- smoothie azobe efakwa izinto ezifana ne- spirulina, i- kale, ama- herb, nokusampushana okwenziwe ngezimpande. Kanti ama- protein powder azobe efakwa okusiza isikhumba nezinwele.
OKUVELA E-MIDDLE EAST
Ukudla okuvela emazweni aseMiddle East okufana ne- hummus, i- pita ne- falafel okuwukudla okwakhiwe ngofulawa.
Muva nje kuthiwa iningi selifuna ukungena shi ekudleni okuvela emorocco, esyria naselebanon. Kulo nyaka kungalindeleka abe sematheni amaqanda abilisiwe, afakwe kwi- spiced tomato sauce, i- tomato jam nelamb.
Kulo nyaka isibalo sabathengi abaqaphelayo sizonyuka kakhulu bebheka ukuthi kungabe ukudla abakudlayo kakuthakwa yini ngezinto ezingaba yingozi empilweni. Nokudla okuhambisana nemigomo engalimazi izilwane izobe isematheni.